सेतो क्रेन (Sterkh): वर्णन, जहाँ जीवन र रोचक तथ्य
यो हिउँ-सेतो मनोरम र राजसी चरा धेरै प्रकृति रिजर्व को एक jewel छ। तर, यसको प्राकृतिक वातावरण मा जनसंख्या निरंतर घट्दो छ। सेतो क्रेन (Sterkh) मात्र रूस को उत्तरी क्षेत्र को सीमित क्षेत्रमा गुँड।
Sterh: बाहिरी सुविधाहरू
साइबेरियन क्रेन को जीनस क्रेन, क्रेन परिवार पर्छ। ठूलो चरा - यसको वृद्धि, भिन्न एक सय चालीस देखि एक सय र साठी सेन्टिमिटर बारे आठ किलोग्राम वजन। स्वाइप क्रेन पखेटा जनसंख्याको आधारमा, दुई सय र दस देखि भिन्न दुई सय र तीस सेन्टिमिटर गर्न।
मात्र लामो-दूरी उडानहरू को जाडो माइग्रेसन समयमा सेतो क्रेन commits। रूसी गुँड र नस्ल मा Sterh। यी चरा राम्ररी ornithologists अनुगमन छन्।
रातो लामो चुच्चो भएको अन्त्य मा तेज Burr भइरहेको - जसद्वारा यो अन्य चरा संग भ्रममा गाह्रो छ सेतो क्रेन (sterkh), एक विशेषता सुविधा छ। त्यहाँ आँखा र चुच्चो पंख आसपास र छाला धनी रातो रंग मा चित्रित र टाढाबाट देख्न छ।
दुई पङ्क्ति मा अवस्थित शरीरमा पंख - सेतो, दुईवटा पङ्क्ति को अन्त्य मा पखेटा को भित्री पक्षमा - कालो। को खुट्टा लामो, pinkish रंग हो। धक्का माथि viscous quagmire मा सार्न अनुमति दिन्छ: तिनीहरूले ठूलो सहायक क्रेन wetlands छन्।
सुरुमा बचेराहरूलाई नीलो आँखा, त्यसपछि तिनीहरूले पहेंलो हुन्छन्। सेतो क्रेन (Sterkh) एक उप गठन भएन बारेमा सत्तरी वर्ष बसोबास।
आज, यस प्रकारका क्रेन को दुई आबादी छन्। एक अर्कह्याङ्गेल्स्क क्षेत्रमा बसोबास, र दोस्रो - को Yamalo-Nenets स्वायत्त जिल्ला मा। सेतो क्रेन - यो एक धेरै सावधान बर्ड छ। सेतो क्रेन, लेख दिइएको छ एक संक्षिप्त विवरण जो, मान्छे संग मुठभेड़ों बच्न हरेक प्रयास बनाउँछ, र यो व्यर्थमा थिएन: को लागि धेरै क्षेत्रहरु मा poachers योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता लाग्छ।
को चरा एक मानिस देखे भने - त्यो गुँड छोडेर। साइबेरियन क्रेन मात्र क्लच फेंक गर्न सक्दैन, तर पहिले नै बचेराहरूलाई hatched। तसर्थ, यस अवधिमा चराहरूले बाधा छैन। सेतो क्रेन (Sterkh), मात्र रूस मा गुँड जो, जाडो अजरबैजान र भारत, अफगानिस्तान र मङ्गोलिया, चीन र पाकिस्तान छ। प्रारम्भिक मार्च मा, आफ्नो मातृभूमि फर्केपछि पनि क्रेन।
Yakutia मा साइबेरियन क्रेन Tundra को रिमोट क्षेत्रमा पठाइएको र swamps र impenetrable वन राख्न छनोट गरिएको छ। यहाँ त्यो जाडो माइग्रेसन सम्म जीवित।
प्रश्न मा रुचि naturalists: "के सेतो क्रेन (Sterkh) खान?" यो सुन्दर चरा को आहार प्रवेश र तरकारी र पशु खाना। जलीय बिरुवाहरु संग: साइबेरियन क्रेन को धेरै रुचाउनु हो जो tuber, कपास घाँस, sedge र cranberries, - तिनीहरूले ठूलो कीरा, अन्य चरा, मुसा, विदेशी बचेराहरूलाई, जीवको र माछा को अन्डा खान इन्कार गरेनन्। हिउँदमा, माइग्रेसन समयमा, साइबेरियन क्रेन बोट खाद्य पदार्थ सीमित। यी चरा कहिल्यै खेत हानि कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
सेतो क्रेन - एक monogamous चरा। को क्रेन छ वर्ष हुनेछ जब Vapors गठन गर्दै हुनुहुन्छ। बीचमा वा मई को अन्त मा गठन चरा एक जोडी भविष्यमा लागि नेस्टिङ स्थान चयन गर्नुहोस्। क्रेन को अन्य प्रकार, आफ्नो पुनर्मिलन टिप्पणीहरू को एक जोडी चर्को गायन जस्तै। विशेषता यी चराहरूको कराउँदै - एक, लामो समयसम्म उच्च र स्पष्ट। यसलाई अन्य प्रजाति देखि एक साइबेरियन क्रेन विशेषताहरु।
साइबेरियन क्रेन गुँड खुले पानी मा निर्माण गरिएको छ। sedge stems तिनीहरूले कडा मंच खचाखच भरिएको छन्। अनिवार्य आवश्यकता गर्दा नेस्टिङ लागि ठाउँ छनौट - ताजा पानी उपलब्धता, पानी जलाशय 40 सेन्टिमिटर कम्तिमा एक गहिराई हुनुपर्छ।
यो संभोग नृत्य जोडे पालन रोचक छ। सुरुमा दुवै चरा उनको टाउको फिर्ता फेंक र, मेलोडिक जटिल र lingering ध्वनि फेंकना। आफ्नो "विवाह" गीत पूरा, पुरुष आफ्नो पखेटा व्यापक, आफ्नो भावि पत्नी तिनीहरूलाई जोडेको राख्छ गर्दा सर्छ। यस समयमा, सेतो क्रेन शेखी, twigs र pats पखेटा माथि फालिएको, धनुष हुन्छन् जो आफ्नो नृत्य, थाल्छन्।
गुँड को निर्माण, दुवै आमाबाबुले संलग्न छन्। सामान्यतया, महिला सानो गाढा स्थलहरू संग खैरो दुई अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। सुक्खा वर्षमा एक हुन सक्छ। महिला incubates र बीस-नौ दिन को सन्तान। यस समयमा पुरुष vigilantly गुँड रखवाली।
Hatched सन्तान बचाउको लागि एक उकालो युद्धमा सुरु हुन्छ। फलस्वरूप, त्यहाँ एक सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा शक्तिशाली चल्ला छ। सत्तरी-पाँच दिन पछि उहाँले खैरो र रातो पंख देखियो। बरफ-सेतो सुंदरियों तीन वर्ष मात्र बारी।
रूस को लाल बुक: सेतो क्रेन (Sterkh)
Sterkh - आफ्नो परिवारको सबै भन्दा ठूलो चरा। यो मुख्य रूप गाह्रो विलुप्त यो प्रजाति सुरक्षित गर्न काम गर्न बनाएर, जीवन को एक पानी तरिका हो। अब Yakut जनसंख्या संख्या तीन हजार भन्दा बढी छैन। पश्चिम साइबेरियन साइबेरियन क्रेन लागि - स्थिति महत्वपूर्ण छ: तिनीहरूले बीस व्यक्तिहरूलाई भन्दा कुनै थप थिए।
सेतो क्रेन को सुरक्षा को गम्भीर मुद्दा 1970 मा लगे थिए। धेरै नर्सरी आरक्षित धन, जहाँ ornithologists अन्डा यी चरा बढ्न स्थापित गरिएको छ। तिनीहरूले पनि बचेराहरूलाई लामो दूरी उडानहरू सिकाउनुहोस्। यद्यपि, पूर्ण सेतो क्रेन गायब हुनेछ भन्ने खतरा (Sterkh)। रातो पुस्तक (अन्तर्राष्ट्रिय) पनि यी लोपुन्मुख जाती को आफ्नो सूची पूरा गर्नुहोस्। यी चरा शिकार पूर्ण निषेधित छ।
पुनरुद्धार लागि आशा
पछिल्लो शताब्दीको मध्य-नब्बे देखि, नर्सरी मा हुर्केका सय एक भन्दा बढी सेतो क्रेन प्राकृतिक वातावरण मा जारी गरिएको छ। दुर्भाग्यवश, त्यस्तो खराब acclimatized बचेराहरूलाई (अधिकतम 20%)। यस्तो उच्च मृत्यु दर कारण जंगली मा आमाबाबुले दिइएको छ जो नेभिगेसन निर्देशन को कमी, साथै उडान प्रशिक्षण, छ।
यो समस्या अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले सच्याउन प्रयास गरिएको छ। तिनीहरूले सार जो मोटो रचनाहरू-ग्लाइडरहरू प्रयोग गरेर बचेराहरूलाई पूरा गर्न थियो एक प्रयोग, सेट अप। रूस मा, हामी यस्तै कार्यक्रम, "आशा को उडान" भनिन्छ विकास गरेका छन्।
2006 मा पाँच trikes बनाइएको थियो, र आफ्नो मद्दत संग जवान साइबेरियन क्रेन बस्ने खैरो क्रेन, साइबेरियन क्रेन, र तिनीहरूलाई संग जाडो भयो जहाँ उज्बेकिस्तान, गर्न Yamal देखि लामो समयसम्म मार्ग लागि लगियो। 2012 मा, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यस्तो कार्यक्रममा भाग लिए। तर केही कारणले, यो समय खैरो क्रेन को साइबेरियन क्रेन स्वीकार गरेका छैनन् र ornithologists युमेन मा Belozersky आरक्षित सात बचेराहरूलाई ल्याउन थियो।
भारत क्रेन चरा-लिली भनिन्छ। इंदिरा गांधी एक सख्त शासन पालन र यी भव्य चरा को सुरक्षा को लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना जो, जसमा सेतो क्रेन wintering ठाउँमा पार्क "Keoladeo" सिर्जना गरिएको थियो एक उर्दी (1981), जारी।
पाँच भन्दा बढी र आधा हजार किलोमिटर: सेतो क्रेन (Sterkh) क्रेन को अन्य प्रकार संग तुलना मा सबैभन्दा लामो बाटो हटाउन। दुई पटक एक वर्ष, क्रेन नौ देशहरूमा भन्दा उड।
जसको इलाका माइग्रेसन समयमा साइबेरियन क्रेन क्रस छ Dagestan, मा, त्यहाँ साइबेरियन क्रेन Fallen सैनिकहरु को प्राण हो कि एक सुन्दर लिजेन्ड छ। को पौराणिक कथा शब्द रसूल Gamzatov लेखिएको थियो जो प्रसिद्ध गीत, को आधार थियो।
को संभोग सिजन मा सेतो क्रेन घण्टा कुनै थप दुई भन्दा एक दिन सुत्न।
को खन्टी खगरिया र सेतो क्रेन को मानिसहरूका लागि एक पवित्र चरा, सबै संस्कार को आदिवासी कुलदेवता आवश्यक चरित्र छ।
खन्टी क्रेन कहिल्यै चिन्ता: त्यहाँ स्थानहरू जहाँ सेतो क्रेन गुँड वसन्त र गर्मी मा गएर विरुद्ध एक unspoken Taboo छ।
यी चरा प्रजनन सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका, ornithologists "दत्तक आमाबाबुले" र आरक्षित मा हुर्काउन को विधि विचार गर्नुहोस्। पहिलो मामला मा, अन्डा सेतो क्रेन खैरो क्रेन को गुँड मा लगाए गर्न सकिन्छ। दोस्रो - बचेराहरूलाई को आरक्षित मा, अलग मानव सम्पर्क बाट बढ्न। त्यसपछि तिनीहरूले एउटा वयस्क जंगली क्रेन जारी छन्।
बर्ड वाचर यो भव्य चरा को संरक्षण उद्देश्य गतिविधिहरु विकास गर्नको लागि। हामी सेतो क्रेन (Sterkh), हामी यस लेखमा प्रस्तुत गरेका छन् जो को खुलासा सुरक्षित कि गरिनेछ र ठूलो चरा लामो आफ्नो दृष्टिकोण हामीलाई खुसी पार्न हुनेछ आशा।
को गर्मी, शरद ऋतु, जाडो र वसन्त को प्रकृति मा मौसमी परिवर्तन
Archipelagic देश। सपना साँचो आउन जहाँ एक ठाउँ
Tver मा फंगल ठाउँ। जब तपाईं च्याउ सिजन सुरु
आरक्षित "मागाडान": वनस्पति र जीव
सैमसंग 300 ई: अवलोकन, निर्दिष्टीकरण
तपाईंको घरको नयाँ बर्षको सजावट।
इतिहासमा पहिलो आर्कटिक क्यानोनी
केही अवस्थामा यो ज्वरो बिना ठंड हुन सक्छ
मधुमेह mellitus: बच्चा चाहिए जो अलर्ट गर्नुपर्छ
खुला नियन्त्रणमा कम्प्युटरबाट kiwi-पर्स वा पैसा
Sturgeon को प्रकार। रूस मा sturgeon को प्रकार
Zasulich वेरा Ivanovna: जीवनी, Trepov प्रयास
ब्रेडक्रंब मा चिकन पकाउन कसरी स्वादिष्ट गर्न?
Ampoules मा Diphenhydramine
जो रूखहरू मई रूस मा ब्लूम
ग्रामीण आकर्षण। सबै अनुहारहरू